केमा होला साम्राज्ञीको ह्याट्रिक ? | Ratopati
बिहीबार ९ जेठ, २०७६ Thursday, 23 May, 2019
केमा होला साम्राज्ञीको ह्याट्रिक ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ३१, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौं – अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई हिरोइन अनुबन्द गरिए चलचित्र चल्छ भन्ने मानसिकता केही निर्माता निर्देशकमा गढेको छ । उनी अभिनित ‘ड्रिम्स’ र ‘ए मेरो हजुर २’को सफलताले निर्माता निर्देशकमा यो छाप परेको हो । यो छापका कारण अभिनेत्री साम्राज्ञीले पनि आफ्नो रेट १० लाख पुर्याएकी हुन् ।
साम्राज्ञी लिँदैमा चलचित्र चल्छ भन्ने सोच राख्ने निर्माता निर्देशकले अब भने एकपटक सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । उनी अभिनित दुई चलचित्र ‘तिमी सँग’ र ‘कायर’ सो अवस्था निम्त्याएको हो । उनी अभिनित यी दुबै चलचित्रले दर्शकको साथ राम्रो पाउन सकेन ।
डेब्यु चलचित्र ‘ड्रिम्स’मा अभिनेता अनमोल केसीलाई समेत आछुआछु बनाएर ‘डिमाण्डेड’ अभिनेत्री बन्न सफल उनको हाइट ‘ए मेरो हजुर २’ले झन् बढायो । सलिमान बाँनियासँग यो चलचित्र रोमान्स समेत दर्शकले रुचाए ।
त्यसपछि आएका ‘तिमी सँग’ले पनि बक्सअफिसमा सुखद नजिता ल्याउने धेरैको विश्वास थियो । साम्राज्ञी पनि ‘तिमीसँग’बाट सफल चलचित्रको ह्याट्रीक गर्ने सोचमा थिइन् । तर सो सपना पूरा हुन सकेन । चलचित्र बक्स अफिसमा नराम्रोसँग पछारियो ।
‘तिमि सँग’ बक्स अफिसमा पछारिए पनि चर्चाका हिसावले हिट लिस्ट रहन सफल साम्रज्ञीलाई अभिनेता आर्यनले सिग्देलले आफ्नो चलचित्र ‘कायरा’मा अनुबन्धित गरे । अहिलेसम्मकै बढी रकम अर्थात १० लाखमा । ओरालो लागेको आफ्नो स्टारडम साम्रज्ञीसँगको सहकार्यले फर्किन्छ भन्ने आर्यनको सोच थियो । तर ‘कायरा’ले स्टारडम फर्काउने त परै जाहोस् समिक्षकको समेत मन जित्न सकेन ।
साम्राज्ञी अभिनित अर्काे एक चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लन्डन’मा अहिले प्रदर्शनको तयारीमा छ । लगातार दुई चलचित्र सफल दिएकी साम्राज्ञीको यो चलचित्र के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । तर यो चलचित्रले उनलाई सफल वा असफल दुई मध्य एकमा भने ह््याट्रीक दिलाउने छ ।
यो चलचित्र सफल भए उनी अभिनित तीन चलचित्र सफल हुनेछन् भने असफल भए लगातार असफल चलचित्रको ह्याट्रिक हुनेछ ।
सोनाक्षीले बबी देओललाई जुरुक्कै उठाएपछि...
कसैले टपलेस फोटो पठाएपछि मोडलबाट खोसियो ‘ब्यूटी क्विन’ को ताज
रेस्टुरेन्टमा कुटपिट काण्ड : विराजले मागे माफी
शाहरुखले ऐश्वर्यालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ‘भुतिनी’ भनेपछि...
के अनमोलको प्रेममा छिन् सारा ?
प्रबल गुरुङले पाटन दरबार स्क्वायरमा भने, ‘म एक समलिङ्गी हुँ र यसमा मलाई गर्व छ’
भारतमा फेरि एक पटक मोदी सरकार
पूर्ण चुनावी नतिजा नआउँदै ओलीले दिए मोदीलाई बधाई
अपराध अनुसन्धानविज्ञ दुई कुकुर ‘गौरी’ र ‘जमुना’
सन्नी देओलको साटो सन्नी लियोनीको नाम लिइयो, नायिकाले सोधिन् यस्तो प्रश्न
आमा र नाबालिका छोरीको हत्या प्रयास
कतार एयरवेजद्वारा ‘समर इन कतार’का लागि कतार राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्सँग सहकार्य
प्रहरीको सकारात्मक बिषयमा फिल्म ‘कप्स’
जेठमै प्रियंका र आयुष्मानको ‘प्रेम दिवस’
जेठको अन्तिम साता ‘मिष्टर एण्ड मिस एसईई अफ द इयर’